China SEBIC 20 nke anụ ọhịa 8 ọsọ ọsọ 48v 500w mpịachi igwe eletriki igwe eletriki na ndị nrụpụta | Funncycle
Moto Brushless, 48V500W Rear Motor
Asambodo EN15194 / OA
Nọmba nlereanya BEF-LM20
Ụba 20 * 2.125 ″ aluminom alloy 6061, TIG welded
Ndụdụ 20, Alloy ndụdụ, MOZO nkwusioru
Taya INNOVA 20 * 2.2 ″ A / V Nwa
Gear Ntọala 8 ọsọ
Batrị 48V 10.5AH, Lithium Batrị, na 2A chaja-SANS
Kinddị igwe elektrọnik a na - arụ ọrụ zuru oke maka ndị na - akwalite eco na ndị na - agba obodo nwere oke ohere maka nchekwa. N'iji ihe dị ka kilomita iri na itoolu *, enyemaka enyemaka ike ga-eme ka ọsụsọ na-agba gị na-aga ebe ị na-aga. Kpakọba akwụkwọ na-ewe ihe dị ka sekọnd, na-enye gị ohere ịga n'ihu n'ọrụ gị n'egbughị oge. Oge ịkwụ ụgwọ elekere anọ na batrị lithium maka ịnwe ụgwọ dị mfe pụtara na ị ga-alaghachi na ikike zuru oke tupu oge eruo ịla, ọ gaghị enwekwa ihe ịtụnanya na ngosipụta batrị ejiri aka.
Nke gara aga: SEBIC agagharị obodo foldị 16 nke anụ ọhịa ọkụ eletrik eletrik
Osote: SEBIC 700c kpochapụwo agagharị diski breeki n'okporo ụzọ obodo ebike